काठमाडौँ । नेपाली युवालाई विदेशिनबाट रोकी स्वदेशमै उद्यमी बनाउने उद्देश्यले ‘हरित रोजगार कार्यक्रम लागू’ हुने भएको छ। दलित उपभोक्ता समूह, प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित अधिकार मञ्च ९डानार० र सहयात्रा फाउण्डेशन नेपाललगायतका..
नेपालका हिमाल आरोहणमा १०९७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालका हिमाल आरोहण शुरू भएको ११४ वर्षमा पर्वतारोहणका क्रममा १ हजार ९७ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त तथ्यांक ५ हजार मीटरमाथिका हिमाल आरोहण तथा फर्किने क्रममा भएका..
अब के हुन्छ ? लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन, अदालत जाने मुख्यमन्त्री राउतको चेतावनी
काठमाडौं । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहको लागि खुलाएको ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाएका छन। शुक्रबार बर्दिवासमा भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को..
म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा, माग पुरा नभए रोजगारमा १ जना पनि विदेश नपठाउने
काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर म्यानपावर व्यवसाी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म विदेश काम गर्न जाने कामदारको कुनै पटि टिकट नकाट्ने दाबी गरेका छन् । विभिन्न मेनपावर..
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत शिक्षकको तलब वृद्धि गरेको छ । प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलब दर्जा अनुसार १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सरकारले..
सामाजिक सुरक्षा कोषले माग्यो एकै पटक ६६ कर्मचारी
काठमाडौं । समाजिक सुरक्षा कोषले एकै पटक ६६ कर्मचारीको माग गरेको छ । कोषले उपकार्यकारी निर्देशकदेखि सहायक तहका ६६ कर्मचारी माग गरेको हो । कोषले लोकसेवा आयोगको सहमतिमा खुला प्रतियोगिताबाट ती..
स्थानीय तहमा साढे ४ हजार कर्मचारीको बढुवा
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेसँगै बाँकी पद बढुवामार्फत पूर्ति गर्ने भएको छ । आयोगले नयाँ भर्ना गर्दा पुराना कर्मचारीको बढुवाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न..
तलब बढेसँगै बढ्यो आयकर सिमा, कति कमाउनेले तिर्नु पर्दैन कर ?
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा बृद्धि गरेसँगै आयकरको सिलिङमा पनि परिवर्तन गरेको छ । सरकारले अधिकृतभन्दा तलको कर्मचारीमा २० प्रतिशत र अधिकृतभन्दा माथिको तलबमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गर्यो । त्यससँगै यसअघि..
यस्तो छ, लोकसेवामा नाम निकाल्ने सुत्र
तुलनात्मक रुपमा गाह्रो मानिए पनि लोकसेवा पास गर्न असम्भव छैन । लोकसेवामा सफल हुन सबैभन्दा पहिले आत्मविश्वास आवश्यक हुन्छ । लोकसेवामा सफल हुने सपना पूरा गर्न पठनपाठनको बानी सुधार्नुपर्छ । हजारौंको..
अब प्यान बिना तलब दिन नपाइने, दिएमा खर्च नमानिने
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत तलबमा लेखिने खर्चमा कडाइ गरेको छ । बजेटसँगै अर्थमन्त्रीले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा आयकर प्रयोजनका लागि प्यान नभएका कर्मचारीलाई दिएको तलब मान्य नहुँने उल्लेख गरेको छ । ‘स्थायी..
सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धिपछि अब कसको कति हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १८ देखि २०..
स्थानीय तहमा ९ हजारभन्दा बढी पदमा जागिर खुल्यो, कुन पदमा कति ? हेर्नुहोस विज्ञापन
काठमाडौ । लोक सेवा आयोगले चौथो, पाँचौ र छैठौं तहका लागि प्राविधिक तथा अप्राविधिकतर्फ विज्ञापन खुलाएको छ । विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरु पदपूर्ती गर्न प्राविधिक र अप्राविधिक दुबैतर्फ..
बम विस्फोटको असरः अष्ट्रेलियाले जारी गर्‍यो ट्राभल एडभाइजरी
काठमाडौं । गएको आइतबार नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौमा बम विस्फोटबाट चार जनाको मृत्यु भएपछि अष्ट्रेलियाले नेपाल आउन चाहने आफ्नो देशका नागरिकलाई नयाँ ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ फरेन..
भोली लोकसेवाले स्थानीय तहको लागि विज्ञापन गर्ने, परिक्षा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार हुने
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार हाल आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक..
सिभिल बैंकले १५७ जना कर्मचारी माग्यो , योग्यता कुन पदलाई कति ?
काठमाडौ । सिभिल बैंकले बैंक क्षेत्रमा जागिर खाइ आफ्नो भविष्य बनाउन चाहानेहरुका लागि अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । बैंकले विभिन्न पाँच पदका लागि १५७ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकद्धारा..
अहिलेसम्म कै सबैभन्दा धेरै पदका लागि लोकसेवाले कर्मचारी माग्दै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले यसै साता स्थानीय तहका लागि आवश्यक करिब १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन खुलाउने भएको छ । ५५५ स्थानीय तहमा रिक्त रहेका १४ हजार ६६२ पदका..
सबै सरकारी कर्मचारीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा घर र गाडी किन्न ऋण दिन माग
काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरुले १ प्रतिशत ब्याजदर मै घर र गाडी किन्ने ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आगामी बजेटमार्फत् यस्तो व्यवस्था गर्न निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले..
तलब नबढेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण
काठमाडौं । जागीरमा पदोन्नति होस्, वर्षैपिच्छे तलब बढिरहोस् भन्ने चाहना हरेक मानिसमा हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, कहिलेकाहीँ कयौं वर्षसम्म पनि तलब बढ्दैन । पदोन्नति पनि हुँदैन..
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले साढे २८ हजार कर्मचारीको १ महिनाको तलब गुम्यो
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको एउटा निर्णयले झण्डै साढे २८ हजार कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको छ । चैत १५ गते अर्थमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले सरकारी स्वामित्वका संस्थान, बोर्ड, कम्पनी र समितिलाई वार्षिकोत्सवको..
एनआईसी एशिया बैंकले माग्यो २५० जना कर्मचारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले आज सूचना जारि गरी एकै पटक २ सय ५० कमर्चारी माग गरेको हो। बैंकले काठमाण्डौभित्र र बाहिरका..
११ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन खुलाउन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिक्षामा आयोग
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनपछि पनि रिक्त रहेका देशभरका स्थानीय तहमा सरकारले नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ। लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटा स्थानीय तहमा..
११ हजारभन्दा बढी खरिदार, नायब सुब्बा, अधिकृत माग्दै संघीय लोकसेवा
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले केही दिनभित्रै स्थानीय तहका लागि ११ हजार ३ सय ४६ जना कर्मचारी माग गर्दै सूचना निकाल्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा..
Results 840: You are at page4of 28